Sideen si hufan u duceeya? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Weligaa miyaad u ducaysay guul?
Hadday maya tahay, maxaa diidaya? Hadaanan Ilaahay weydiisan guul, waxay noqon doontaa guuldarro, guuldarro? Waxay kuxirantahay sida aan u aragno guusha. Waxaan u arkaa qeexitaanka soo socda mid aad u wanaagsan: "Si aan u oofiyo ujeeddada Eebbe ee noloshayda ee xagga iimaanka, jacaylka iyo xoogga Ruuxa Quduuska ah iyo inaan ka rajeeyo natiijada ka timid xagga Ilaah."
Bal xusuuso wixii aad ugu ballanqaadday addoonkaagii Muuse xagga erayada: Haddaad xadgudubtay, waxaan kugu kala firdhin doonaa dadyowga. Nexemyaah 1: 8 Cadadka tarjumida)
Haddii aadan Ilaah weydiisan karin guul waxa aad qabaneyso, waxaa jira afar qodob oo Nexemyaah noloshiisa ah sida ugu wanaagsan oo aad ugu duceysan kartid:
Codsiyadayadu waxay ku saleysan yihiin dabeecadda Eebbe. U soo ducee adiga oo og in Ilaahay ka jawaabi doono: "Waxaan filayaa jawaabta baryahan, waayo waxaad tahay Ilaahey aamin ah, waxaad tahay Ilaahe weyn, ilaah jecel, waxaad tahay Ilaah cajiib ah oo xallin kara dhibaatadan!"
Dembiyada miyirka leh Qirasho (dhaqan xumo, deyn, qalad). Nexemyaah ka dib markuu ducadiisa ku saleeyay waxa Ilaah yahay, wuxuu qirtay dembiyadiisa. Wuxuu yidhi, Waan qirtay dembiyadayda… aniga iyo reerka aabbahayba waannu dembaabnay… annagu waan kugu xadgudbi jirnay adiga ... adna ma addeecin. helay. Xitaa isagu ma uusan dhalan markii ay taasi dhacday. Laakiin isagu laftiisuu galay dembiyadii umadda, isaguna qayb buu ka ahaa dhibaatada.
Sheeg ballanqaadyada Ilaah. Nexemyaah wuxuu baryay Rabbiga: "Oh, xusuuso ballanqaadyadii aad u gashay addoonkaagii Muuse." Ilaah miyaa loogu yeeri karaa inuu "xusuusto"? Nexemyaah wuxuu Ilaah xusuusinayaa ballankii uu u qaaday umaddii reer binu Israa'iil. Masaal ahaan, wuxuu dhahay, Ilaahow, waxaad noogu digtay Muuse, haddaan daacadla'aan u deginno dalka Israa'iil. Laakiin sidoo kale waxaad ballanqaadday haddii aan ka qoomameyno inaad dalka dib noo siin doontid. ”Ilaahay miyuu u baahan yahay in la xasuusto? No. Miyuu illoobaa ballamihiisii? No. Maxaynu si kasta ugu samaynaa? Way na caawinaysaa si aannaan ilaawin.
Aad ugu dadaal in aan weydiisano. Haddii aan filayno jawaab gaar ah, markaa waa inaan xaqiiqdi weydiisanaa. Haddii codsiyadeenna loo ilaaliyo guud ahaan, sideen ku ogaan karnaa in laga jawaabay? Nexemiah kama horjoogsado, wuxuu weydiyaa guul. Aad buu ugu kalsoon yahay tukashadiisa.
Ilaaha aaminka ah ee Ballamada, naga cafi dembigeenna oo dhageyso baryadayada. Naga dhig guul aan ku faani karno nolosheena. Aamiin
Waxaa qoray Fraser Murdoch
WKG wacdiye ee Scotland